Askar Itoobiyaan Ah Oo Lagu Kala Dilay Somali Iyo Itoobiya. – Calamada.com
Askar Itoobiyaan Ah Oo Lagu Kala Dilay Somali Iyo Itoobiya.
calamada July 18, 2016 1 min read
Wararka laga helayo degmada Baydhabo ee xarunta gobalka Baay waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay agagaarka deegaanka Awdiinle ee duleedka degmadaasi uu ka dhacay iska hor’imaad lagu dilay askar Itoobiyaan ah.
Iska hor’imaadka waxa uu dhex maray ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya iyo maleeshiyaatka maamulka gaala raaca Shariif Sakiin’iyadoona iska hor’imaadka ay ka qeyb qaateen Taangiyada ciidamada Amxaarada.
Inta la xaqiijiyay iska hor’imaadkaasi waxaa lagu dilay afar askari oo Itoobiyaan ah tiro kalane oo Kufaarta Xabashida Itoobiya ka tirsan waa lagu dhaawacay.
Dhanka ugu yaraan 13 Askari Itoobiyaan ah ayaa dhimatay 10 kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii weerar hubeysan uu ka dhacay magaalo dhacda Waqooyi galbeed ee wadanka Itoobiya.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in kooxo uu ku tilmaamay fallaago Ereteria ay soo abaabushay ay weerar ka geysteen magaalada Godera ayna dileen 11 Askari.
Wakaaladda wararka Itoobiya ayaa baahisay war ay ku sheegayso in fatqalado khasaara dhaliyay ay ka dhaceen magaalada Gondera iyadoo dhibaatadii dhacday dusha uga tuurtay xukuumadda Asmara.
Shabakad ay leeyihiin kooxaha mucaaradka Itoobiya ayaa baahisay in dad kasoo jeeda Qowmiyadda Amxaarada ay weerar ku qaadeen saldhig melleteri oo ciidanka Itoobiya ku lahaayeen Gondera.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 13-10-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 14-10-1437 Hijri.